Mihamafy Ilay ‘Ady Adino’ ao Yémen Taorian’ny Fanafihana An’habakabaka Notarihan’i Saodiana Tany Al Hudaydah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 10:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, Deutsch, English
Fahitàna ny faritr'i Alhook ao Hodeida iray andro taorian'ireo daroka an'habakabaka nahafaty olona 30, tamin'ny 21 Septambra lasa teo. Loharanom-baovao: Hisham Al-Omeisy teo amin'ny Twitter. Source: Hisham Al-Omeisy tao amin'ny Twitter. …..
Ny alarobia 21 Septambra 2016 lasa teo, daroka an'habakabaka notarihin'i Arabia no niantraika tamin'ny tanàna manamorona ny seranan-tsambon'i Al Hydaydah ao Yémen. Araka ireo loharanom-baovao ara-pahasalamana niresaka tamin'ny CNN, fara-fahakeliny sivily 30 no maty ary fara-fahakeliny trano 14 no rava, ary maherin'ny 90 ireo trano simba.
Al Hudaydah, tononina ihany koa hoe ‘Hodeida’ (الحديدة‎‎), dia eo ambany fanaraha-mason'ireo Houthi mpikomy ka lasibatr'ireo zera baomba miverimberina ataon'ny mpiaradia tarihan'ny Saodiana. Izay indrindra, mitatitra ny Al Arabiya fa misy ‘fivoriambe iray nataon'ireo Houthi mpitarika milisy tao anaty lapam-panjakana’. Nanameloka ireo daroka an'habakabaka ireo ny Firenena Mikambana.
Matetika antsoina foana hoe ‘Ny Ady Adino‘ ny fifandirana ao Yemen ary tsy mbola mazava tsara foana amin'ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ireo mpandray anjara amin'io. Tamin'ny taona 2015, nanoratra lahatsoratra ny BBC, nitondra ny lohateny hoe ‘Ireo krizin'i Yémen: Iza no miady amin'iza?’ izay hanazavan'izy ireo fa:
Ny fototry ny ady dia eo amin'ireo hery tsy mivadi-pitokisana amin'ny filoha iharan'ny fahirano, Abdrabbuh Mansour Hadi, sy ireo mpiara-dia amin'ireo mpikomy Zaidi Shia fantatra amin'ny hoe Houthis, izay nanery an'Andriamatoa Hadi mba handositra an'i Sanaa renivohitra tamin'ny volana Febroary.
Novakivakian'ireo hery fiarovana ao Yémen ny fifampitokisana, miaraka amin'ireo ampahany sasany manohana an'Andriamatoa Hadi, sy ireo hafa ny Houthis sy Ali Abdullah Saleh nodimbiasan'i Hadi, izay nijanona ho manan-danja ara-politika. Andriamatoa Hadi dia tohanan'ireo milisy Sunni maro an'isa any atsimon'ny firenena, milisy fantatra amin'ny anarana hoe Komitim-Panoheran'ny Vahoaka sy ireo foko eo an-toerana ihany koa.
Miara-toherin'ny al-Qaeda ao amin'ny saikinosy Arabia (AQAP) ny Filoha sy ny Houthis, izay nikarakara ireo fanafihana mahafaty avy any amin'ireo toerana famaharany any atsimo sy atsimo-atsinanana.
Manana tatitra iray ihany koa manazava ny fifandirana, ny Amnesty International , izay efa tany amin'ny taona 1990 mba hanome antony iray. Io dia ahitàna ny fomba “fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny maha-olona” vitan'ireo ankolafy rehetra voakasik'io fifandirana io. Vao haingana, fantatsika fa fara-fahakeliny olona 10.000 no maty nanomboka tamin'ny taona 2015, ahitana olona 60% eo ho eo maty novonoin'ny mpiaradia tarihan'ny Saodiana.
Lazaina fa nikendry toerana famaharan'ny tafika an-dranomasina mpihoko izy ireo, tamin'ny volana aogositra 2015 no nandaroka baomba voalohany tao amin'ny seranan-tsambon'ny tanàna ireo mpiaradia, nanao fanakanana ny seranana, fanaovana fahirano ny tanàna, ary fanakanana ireo fanampiana noho ny maha-olona tsy ho tonga any amin'izay mila azy.
Al Hudaydah no iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao Yémen, misy mponina manodidina ny 400.000; izy ihany koa no renivohitry ny Governoràn'i Al Hudaydah, izay ahitana mponina manodidina ny 2.620.000 ao aminy.
Rehefa nanontanian'ny CNN momba ireo tatitra mikasika ireo sivily niharan-doza tao Al Hudaydah i Ahmed Asseri, mpitondra tenin'ny mpiaradia, dia nanome valiny bontolo be hoe:
Sahala amin'ireo tombatombana rehetra voarainay, ho jerena ny vaovao ary rehefa hita [ho] manamafy ireo honohono niainga taminà porofo azo tsapain-tanàna, miroso amin'ny dingana manaraka amin'izay izahay mikasika ny fanadihadiana.
Mandritra izany fotoana izany, naka ireo media sosialy ireo Yemenita mba hanehoany ny hakiviany mikasika ny tsy fahombiazan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena amin'ny fiatrehana ireo krizy.
Teo amin'ny Facebook, nanoratra izao tononkalo manaraka izao ho an'i Al Hudaydah i Hossam Hamidaddin, Yemenita 27 taona:
Al Hudaydah, ilay tanànan'ireo vahoaka fantatra amin'ny fahatsorana, fahatsaram-panahy, ary firavorvoana… Nandany ireo androm-piainana maminay tao izahay. Tanàna iray an'ireo olona miaina ny hafalian'ny lanitra. Manjopika sahala amin'ny taratry ny volana ny fony sy tsikin'izy ireo. Saingy tsy hibaliaka intsony ao Hudaydah ny volana… Haizim-pito. Haizim-pito irery ihany no ho hita ao Hudaydah aorian'ny anio alina, haizim-pito sy hiakiakan'ny hadisoam-panantenana.
Avy ao anaty lanitra mainty, tsy ireo kintana no miraraka fa ireo bala afomangan'izy ireo. Bala afomangan'ireo barbariana mpamono olona izay tsy mitady zavatra hafa afa-tsy ny hanolana izay tsara tarehy rehetra. Naolan'ny bala afomangan'izy ireo ny Red Bride-nay tsara tarehy. Rotehan'izy ireo ny maha-virjiny azy ary nendasiny tamin'ny rà ny akanjony. Rà. Milomano ao anaty rà sy kiakiaky ny fangirifiriana ilay tanàna maminay…
Mitomany ny vahoakako ary ireo ranomasony mirotsaka tsy avy amin'ny masony akory, fa avy ao am-pon'izy ireo… Ireo fony tsy hitempo intsony noho izy ireo efa mitsotra ao ambanin'ireo korontana sy korontam-baton'ny tanàna.
Sahala amin'ireo Yemenita maro tsy tambo ho isaina, tsy afaka niverina tany Yémen i Hamiddadin hatramin'ny nikatonan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny 10 Aogositra, noho ireo daroka an'habakabaka nohamafisin'ny mpiaradia tohanan'ny Saodiana tao Sanaa. Eny tokoa, nitatitra ny Public Radio International hoe:
Noho ny fikatonan'ny seranam-piaramanidina ao Yémen, vitsy ireo sidina ara-toekarena anatiny sy ivelan'ny seranan'i Sanaa. Ireo fiaramanidina mpiady sisa no hita eny an'habakabaka.
Pikatsary iray mampiseho ny habakabaka Yemenita avy amin'ny FlightRadar24 tamin'ny 23 Septambra mampiseho ny maha-foana izany (tsy tazana amin'ny radara ireo fiaramanidina mpiady):
Pikantsary avy amin'ny FlightRadar24 mampiseho an'i Yémen. Loharano.
Nanontany i Hisham Al-Omeisy, Yemenita mahery fo hoe:
Tsotra loatra ve aho raha manantena foana ireo fanamelohana iraisampirenena tamin'ireo daroka an'habakabaka nataon'ny Saodiana tamin'ny alina lasa teo tamin'ireo trano ao Hodeidah? #Yemenpic.twitter.com/JLPTEprnXU
Manakaiky ny 1.400 taona ny tantaran'ny faritry, mametraka azy ho anisan'ny antitra indrindra amin'ireo ao Yemen. Zabid, tanàn-dehibe iray manakaiky ny morontsiraky ny Governoràn'i Al Hudaydah, tafiditra ho Toerana Vakoka Iraisam-pirenena UNESCO nanomboka tamin'ny taona 1993 ary tafiditra ao anaty lisitr'ireo Vakoka Iraisam-pirenena Tandindonin-doza nanomboka tamin'ny taona 2000. Fantatra amin'ny hoe Maoske Lehibe io, naorin'i Abu Musa Ashaari iray amin'ireo mpanaraka an'i Muhammad, tany amin'ny 628 taorian'i Jesosy Kristy.
Aorian'i Aden, ny seranan-tsambon'ny tanàna Al Hudaydah no tena manan-danja indrindra ao Yémen ary araka izany dia manana ny lanjany lehibe ara-politika sy ara-jeografia.